Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Boeing si ay u dhisto nooc cusub oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee Australia
Airlines • Airport • Wararka Australia • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Loyal Wingman waa diyaaraddii ugu horraysay ee dagaal milateri ah oo lagu naqshadeeyo laguna soo saaro Australia nus qarni. Boeing Australia ayaa hadda horumarinaysa lix ka mid ah diyaaradaha iyada oo lala kaashanayo Royal Australian Air Force.
Boeing ayaa daaha ka rogtay qorsheyaal ay ku dhiseyso nooc cusub oo ah diyaarad milateri oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee Australia.
Diyaaradda cusub ee milateriga ee Boeing ayaa adeegsata sirdoon macmal ah si ay ula shaqeyso diyaaradaha dadka.
Boeing ayaa u dooratay magaalada Toowoomba ee Queensland inay noqoto meesha ugu dambaysa ee lagu shirayo diyaaradaheeda Loyal Wingman ee aan duuliyaha lahayn.
Shirkadda weyn ee hawada sare ee Maraykanka Boeing ayaa ku dhawaaqday inay qorshaynayso inay Australia ka dhisto diyaaraddeeda cusub ee Loyal Wingman ee aan duuliyaha lahayn.
Sida laga soo xigtay Boeing, waxay u dooratay magaalada Toowoomba ee gobolka Queensland inay noqoto meesha ugu dambaysa ee lagu diyaariyo nuuca cusub ee diyaaradaha milatariga ee aan duuliyaha lahayn. Duulimaadyadii tijaabadii ugu horreysay ayaa la soo gabagabeeyay horaantii sanadkan.
Ku dhawaaqista ayaa imaanaysa toddobaad kadib markii Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia ay ku dhawaaqeen a isbahaysiga amniga cusub kaas oo Australia siin doona gujisyo quwadda nukliyeerka ku shaqeeya. Heshiiska waxaa cambaareeyay Shiinaha waxaana uu sare u qaaday xiisada ka taagan gobolka Indo-Pacific.
Sida laga soo xigtay Boeing Difaaca Australia, horumarinta diyaaradda cusubi waxay u socotaa sidii loogu talagalay. UAV -ga cusub wuxuu adeegsadaa sirdoon macmal ah si uu ula shaqeeyo diyaarado dad leh waxaana lagu uuraystay, la naqshadeeyay oo laga sameeyay Australia.
Waa diyaaraddii dagaal ee ugu horreysay oo milateri ah oo Australia lagu naqshadeeyo laguna soo saaro nus qarni. Boeing Australia waxay hadda horumarinaysaa lix ka mid ah diyaaradaha iyadoo lala kaashanayo Royal Australian Air Force.
Wax amar ah weli lama xaqiijin, ayaa leh Boeing, laakiin dawladda Australia waxay u muuqataa mid ku kalsoon oo ku faraxsan awoodda Loyal Wingman.
Diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn ayaa laga dhisi doonaa xarun ku taal garoonka diyaaradaha ee Wellcamp, oo ay leedahay shirkadda Wagner.
Guddoomiyaha Wagner John Wagner ayaa sheegay inuu rajaynayo in aagga difaaca iyo aerospace ee madaarka ay soo jiidan doonaan shirkado badan oo ku jira goobo la mid ah.
Mashruuca ayaa la filayaa inuu abuuro 300 oo shaqo inta dhismaha xaruntu socoto iyo 70 boos oo hawlgal iyo wax soo saar oo socda.
Raiiselwasaaraha Gobolka Queensland Annastacia Palaszczuk ayaa sheegtay in ku dhawaaqistu tahay “war fantastik ah” waxayna u taagan tahay markii ugu horeysay ee Boeing ay xarun noocan ah ka samaysato meel ka baxsan Waqooyiga Ameerika.